Okwu na Ọnọdụ | Nzuzo-Lawyers Limited / Companies Inc.
﻿Usoro ọrụ na ọnọdụ
Usoro na ọnọdụ ndị a na-achịkwa iji ojiji weebụ a; site n'iji weebụsaịtị a, ị nabatara usoro na ọnọdụ a zuru ezu. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị na okwu na ọnọdụ ndị a ma ọ̄ bụ akụkụ ọ bụla nke usoro na ọnọdụ ndị a, ị gaghị eji ebe nrụọrụ weebụ a.
Ga-adịkarịa ala 18 afọ iji jiri webụsaịtị a. Site n'iji webụsaịtị a yana ịnakwere usoro na ọnọdụ a ị na-enye ikike ma na-anọchite anya na ị dịkarịa ala 18 afọ.
Weebụsaịtị a na-eji kuki. Site n'iji webụsaịtị a ma kwenye na usoro na ọnọdụ a, ị kwenyere na ụlọ ọrụ anyị ejiri kuki dịka usoro nke Ndị ọka iwu nwere oke iwu nzuzo / iwu kuki.
Ikike iji Weebụsaịtị
Ọ gwụla ma e kwuru ọzọ, ndị ọka iwu Limited (ụlọ ọrụ Nevada) na / ma ọ bụ ndị nyere ya ikikere na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ Incorporated ma nwee ikike ikike ikike ọgụgụ isi na weebụsaịtị yana ihe dị na weebụsaịtị. Dabere na ikike dị n'okpuru, echekwara ikike ikike ọgụgụ isi ndị a niile.
Nwere ike ịlele, budata maka naanị ebumnuche mkpuchi, ma bipụta ibe ma ọ bụ ọdịnaya ndị ọzọ na weebụsaịtị maka ojiji nkeonwe, dabere na mmachi ndị akọwapụtara n'okpuru na ebe ndị ọzọ na usoro na ọnọdụ ndị a.
Ikwesighi weghachite ihe omuma site na weebụsaịtị a (tinyere republication na weebụsaịtị ozo); ree, gbazinye ma ọ bụ sub-ikike ihe si na weebụsaịtị; gosiputa ihe obula site na webusaiti n’ihu oha; mụta nwa, oyiri, detuo ma ọ bụ were ihe ndị ọzọ were webụsaịtị a maka ebumnuche azụmaahịa; dezie ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ gbanwee ihe ọ bụla na weebụsaịtị; ma ọ bụ nyegharịa ihe na weebụsaịtị a belụsọ maka ọdịnaya, ma ọ bụrụ na ọ dị, kpọm kwem ma gosipụta ya maka redistribution.
Ebe edobere ọdịnaya maka nkesa, enwere ike ịkesa ya naanị site na ikikere ederede site n'aka onye isi nke Lawyers Limited na ụlọ ọrụ Nevada.
Ojiji A Ga-anakwere
Ị gaghị eji weebụsaịtị a n'ụzọ ọ bụla nke na-akpatara, ma ọ bụ nwere ike ịkpata, mebie weebụsaịtị ma ọ bụ mmebi nke nnweta ma ọ bụ nnweta nke weebụsaịtị; ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla nke iwu akwadoghị, iwu na-akwadoghị, aghụghọ ma ọ bụ na-emerụ ahụ, ma ọ bụ n'ihe metụtara iwu ma ọ bụ ọrụ na-ezighị ezi, iwu na-akwadoghị, aghụghọ ma ọ bụ na-emerụ ahụ.
Ekwesighi iji weebụsaịtị a iji kpochaa, chekwaa, zipu, zipu, zipu, jiri, bipụta ma ọ bụ kesaa ihe ọ bụla nke gụnyere (ma ọ bụ na-ejikọta ya na) ọ bụla spyware, virus kọmputa, Trojan ịnyịnya, irighiri, keystroke logger, rootkit ma ọ bụ ndị ọzọ kọmputa kọmputa.
Gaghị eme usoro nchịkọta data ọ bụla ma ọ bụ akpaaka na-akpaghị aka (gụnyere na enweghị nhichapụ mkpochapu, ntinye data, mmịpụta data na mkpokọta data) ma ọ bụ na mmekọrita weebụsaịtị a na-enweghị nkwenye ederede ederede Lawyers Limited.
Ikwesighi iji weebụsaịtị a iji zipu nkwukọrịta ahia ndi a na-akwadoghi.
Ikwesighi iji webụsaịtị a maka ebumnuche ọ bụla metụtara ahịa na-enweghị nkwupute ederede ederede nke ndị ọka iwu Limited.
Amachibidoro ụfọdụ ebe nrụọrụ weebụ a. Ndị ọka iwu nwere ikike igbochi ohere ịbanye na mpaghara ndị ọzọ na weebụsaịtị a, ma ọ bụ weebụsaịtị a niile, na aka ndị ọka iwu Law Limited.
Ọ bụrụ na ndị ọka iwu nyere gị NJ njirimara na paswọọdụ iji nyere gị aka ịnweta mpaghara amachibidoro nke weebụsaịtị a ma ọ bụ ọdịnaya ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ, ị ga-ahụrịrị na NJ onye ọrụ na paswọọdụ nwere nzuzo.
Ndị ọka iwu nwere ike iwepu njirimara gị na paswọọdụ gị na naanị ndị ọka iwu na-enweghị ọkwa ma ọ bụ nkọwa.
N'okwu ndị a na "ọnọdụ njirimara gị" pụtara ihe (gụnyere enweghị ederede, ihe oyiyi, ihe ọdịyo, ihe vidiyo na ihe ọdịyo-visual) nke ị na-edo onwe gị n'okpuru ebe nrụọrụ weebụ a, maka nzube ọ bụla.
Grant nyere ndị ọka iwu nwere oke zuru ụwa ọnụ, nke a na-enweghị ike ịgbagha agbagha, nke na-abụghị naanị, ikikere na-enweghị ikike iji, mụta nwa, gbanwee, bipụta, tụgharịa ma kesaa ọdịnaya onye ọrụ gị na mgbasa ozi ọ bụla dị adị ma ọ bụ n'ọdịnihu. I nyekwara ndị ọka iwu nwere ikike ikikere nke ikike ndị a, yana ikike iweta ihe maka ịda iwu ndị a.
Ọdịnaya nke onye ọrụ gị agaghị abụ nke iwu na-akwadoghị ma ọ bụ iwu na-akwadoghị, agaghị emebi iwu nke ọ bụla nke atọ, ma ghara inwe ike ịbute ikpe ma ọ bụ megide gị ma ọ bụ ndị ọka iwu nwere oke ma ọ bụ ndị ọzọ (n'okwu ọ bụla n'okpuru iwu ọ bụla).
Ị gaghị edozi ọdịnaya ọ bụla nke onye ọrụ na weebụsaịtị nke dị ma ọ bụ mgbe ọ bụla bụ isiokwu gbasara usoro ikpe ma ọ bụ ikpe ziri ezi ma ọ bụ mkpesa yiri nke ọzọ.
Ndị ọka iwu nwere ikike idezi ma ọ bụ wepu ihe ọ bụla enyere na weebụsaịtị a, ma ọ bụ echekwa ya na sava ndị ọka iwu Lawyers, ma ọ bụ kwadoro ma ọ bụ bipụtara na weebụsaịtị a.
Na agbanyeghị ikike ndị ọka iwu nwere ikike n'okpuru usoro na ọnọdụ ndị a n'ihe metụtara ọdịnaya onye ọrụ, ndị ọka iwu anaghị akwụ ụgwọ iji nyochaa ntinye nke ọdịnaya dị otu a, ma ọ bụ mbipụta ọdịnaya dị na weebụsaịtị a.
Enweghị akwụkwọ ikike
A na-enye weebụsaịtị a "dịka ọ dị" na-enweghị ihe nnochi ma ọ bụ ikike ọ bụla, gosipụtara ma ọ bụ gosipụta. Ndị ọka iwu na-enweghị oke na-egosichitere gị weebụsaịtị ma ọ bụ ozi yana akụrụngwa enyere na webụsaịtị a.
Enweghi ajọ mbunobi na izugbe nke paragraf a kpọtụrụ aha, Lawyers Limited anaghị akwado na weebụsaịtị a ga-adị mgbe niile, ma ọ bụ dị ma ọlị; ma ọ bụ ozi dị na weebụsaịtị a zuru ezu, eziokwu, ziri ezi ma ọ bụ na-abụghị nduhie.
Onweghị ihe dị na webụsaịtị a mejupụtara, ma ọ bụ pụtara ịbụ, ndụmọdụ ụdị ọ bụla. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ndụmọdụ gbasara iwu, ụtụ isi, ego ma ọ bụ ọgwụ ọ bụla ị kwesịrị ịgakwuru ọkachamara tozuru etozu.
Akwụsị nke Obu
Ndị ọka iwu agaghị akwụ ụgwọ gị (ma ọ bụ n'okpuru iwu nke kọntaktị, iwu nke iwu ma ọ bụ nke ọzọ) n'ihe metụtara ọdịnaya nke, ma ọ bụ ojiji nke, ma ọ bụ na uzọ ọzọ na weebụsaịtị a:
ruo na ebe nrụọrụ weebụ dị ma ọ bụ na enyeghị ya n'efu, maka ọnwụ ọ bụla;
maka ọpụpụ ọ bụla, ọpụrụiche pụrụ iche ma ọ bụ nke bara uru; ma ọ bụ
maka ihe nkwụfu ego ọ bụla, ọnwụ nke ego, ego, uru ma ọ bụ atụmanya echekwa, ụgwọ nke nkwekọrịta ma ọ bụ mmekọrịta mmekọrịta, njedebe ma ọ bụ mmasi, ma ọ bụ ọnwụ ma ọ bụ mmebi nke ozi ma ọ bụ data.
Akwụsị ikike a dị n'ọrụ ọbụlagodi ma ọ bụrụ na enyere ndị ọka iwu Law Limited ndụmọdụ nke mfu ahụ.
Ọ dịghị ihe dị na mkpokọta webụsaịtị a ga-ewepu ma ọ bụ belata akwụkwọ ikike ọ bụla nke iwu kwuru na ọ ga-abụ iwu na-akwadoghị wepu ma ọ bụ ịgba; na ọnweghị ihe dị na webụsaịtị a ga-ewepu ma ọ bụ belata oke nke ndị ọka iwu Limited maka nke ọ bụla:
ọnwụ ma ọ bụ mmerụ ahụ nke eleghara anya nke nleghara anya nke ndị ọka iwu; wayo ma ọ bụ wayo iji kọwahie ụgha nke ndị ọka iwu Limited; ma ọ bụ ihe ọ ga-abụ iwu na-akwadoghị ma ọ bụ iwu akwadoghị maka ndị ọka iwu nwere oke iwepu ma ọ bụ ịgba, ma ọ bụ ịnwa ma ọ bụ kwupụta iwepu ma ọ bụ ịbelata, ụgwọ ya.
Site n'iji weebụsaịtị a, ị kwenyere na ịwepu na ikike nke iwu ewepụtara na nkwupụta webụsaịtị a nwere ezi uche.
Ọ bụrụ n’icheghị na ha nwere ezi uche, ịgaghị eji webụsaịtị a.
Nabatara nke ahụ, dị ka iwu na-egbochi ikike, Lawyers Limited, ụlọ ọrụ Nevada, nwere mmasị na ịmachi ọrụ nke ndị ọrụ ya na ndị ọrụ ya. Agree kwenyere na ị gaghị eweta ebubo ọ bụla n'onwe gị megide ndị isi, ndị isi ma ọ bụ ndị ọrụ Lawyers Limited n'ihe gbasara ọghọm ọ bụla ị tara na njikọ weebụsaịtị.
Enweghi ajọ mbunobi na paragraf a dị n'elu, ị kwenyere na ikike nke ikike na ọrụ iwu akọwapụtara na webụsaịtị a ga-echekwa ndị ọrụ Lawyers Limited, ndị ọrụ ya, ndị ọrụ ya, ndị enyemaka ya, ndị na-anọchi ya, ndị ọrụ na ndị ọrụ ngo yana ndị ọka iwu Limited
Ndokwa ndị a na-agaghị emezigharị
Ọ bụrụ n’onyinye webusaiti a gosipụtara, ma ọ bụ chọpụta na ọ gaghị ekwe omume, iwu agaghị emetụta ya, ọ gaghị emetụta mmezi nke ihe ndị ọzọ ịchọrọ maka webụsaịtị a.
Na-akwụghachi ndị ọka iwu na-akwụghị ụgwọ ma na-arụ ọrụ iji mee ka ndị ọka iwu ghara ịkwụ ụgwọ maka mmebi ọ bụla, mmebi, ụgwọ, ụgwọ na mmefu ọ bụla (gụnyere na-enweghị oke mmefu iwu na ego ọ bụla ndị ọka iwu kwadoro na ndị ọzọ iji mezuo nkwupụta ma ọ bụ esemokwu na ndụmọdụ ahụ nke ndị ọkàiwu na-ahụ maka iwu Lawyers Limited) butere ma ọ bụ taa ahụhụ site n'aka ndị ọka iwu na-ebili n'ihi mmebi iwu ọ bụla nke ị nwere n'usoro nke usoro na ọnọdụ a, ma ọ bụ na-esite na nkwupụta ọ bụla na ị mebiri usoro ọ bụla nke usoro na ọnọdụ a.
Mmebi nke Usoro na Ọnọdụ ndị a
Enweghi mmebi iwu nke ikike ndị ọka iwu ndị ọzọ n'okpuru usoro na ọnọdụ ndị a, ọ bụrụ na ịda iwu na ọnọdụ ndị a n'ụzọ ọ bụla, ndị ọka iwu nwere ike ịme ihe dị ka ndị ọka iwu Limited lere anya na ọ kwesịrị ekwesị iji merie mmebi ahụ, gụnyere ịkwụsị ị nweta weebụsaịtị, igbochi ị nwere ike ịnweta weebụsaịtị, igbochi kọmputa site na iji adreesị IP gị ịnweta weebụsaịtị, ịkpọtụrụ onye na-ahụ maka ọrụ ịntanetị ka ha rịọ ka ha gbochie gị ịnweta weebụsaịtị na / ma ọ bụ weta usoro ikpe ụlọ ikpe megide gị.
Ndị ọka iwu nwere ike ịgbanwe usoro na ọnọdụ ndị a site n'oge ruo n'oge. Usoro edepụtara na ọnọdụ edegharịrị ga-emetụta na ojiji webụsaịtị a site na ụbọchị nke ebipụtara usoro edegharịrị edegharị na weebụsaịtị a. Biko lelee peeji a oge niile iji hụ na ị maara ụdị nke ugbu a.
Ndị ọka iwu nwere ike ịnyefe, nkwekọrịta ọhụụ ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ na-emeso ikike na Lawyers Limited ikike na / ma ọ bụ ọrụ dị n'okpuru usoro na ọnọdụ ndị a na-agwaghị gị ma ọ bụ nweta nkwenye gị.
Ị nwere ike ị gaghị agafe, nkwekọrịta nkwekọrịta ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ, na-emeso ikike na / ma ọ bụ ọrụ gị n'okpuru usoro na ọnọdụ ndị a.
Ọ bụrụ n ’ụlọ ikpe ma ọ bụ ikike ndị ọzọ tozuru oke kpebisiri ike inye iwu na ọnọdụ ndị a, iwu agaghị aba uru ma ọ bụ nwee ike itinye n'ọrụ, iwu ndị ọzọ ga-aga n'ihu. Ọ bụrụ n'onye ọ bụla na-ezighi ezi na / ma ọ bụ nke anaghị agbagha, ọ ga-abụ ihe iwu kwadoro ma ọ bụ nke ga-enyere aka ma ọ bụrụ na ehichapụ akụkụ ya, akụkụ ahụ ga-aga n'ihu.
Usoro na ọnọdụ a mejupụtara nkwekọrịta niile dị n'etiti gị na ndị ọka iwu nwere oke maka ojiji nke weebụsaịtị a, ma gbanwee nkwekọrịta niile gara aga n'ihe gbasara ojiji ị webụsaịtị a.
Usoro na ọnọdụ ndị a ka a ga-achịkwa ma kọwaa dịka iwu Florida si dị, esemokwu ọ bụla metụtara usoro na ọnọdụ ndị a ga-edo onwe ya n'okpuru ikike naanị nke ụlọ ikpe dị na Broward County, Florida.
Ndebanye aha na ikike
Nkọwa nkọwa nke ndị ọka iwu
Aha zuru ezu nke ndị ọka iwu Limited bụ Lawyers Limited.
Edere ndị ọka iwu na Nevada.
Adreesị iwu e debara aha ndị ọka iwu bụ 701 S Carson St., Ste. 200, Obodo Carson, NV 89701
Adreesị nzipu ozi ya bụ 23638 Lyons Ave. # 223, Santa Clarita, CA 91321.
Nwere ike ịkpọtụrụ Lawyers Limited site na email na info@companiesinc.com.